Vana vanodzidza ruzivo rwakakosha uye matanho ekudhanha kwe ballet - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Vana vanodzidza rumwe ruzivo rwakakosha uye matanho ekudzivirira kutamba
Vabereki vazhinji vanodavira kuti kudzidza kutamba kunogona kuvandudza hunhu hwavo, izvo ichokwadi, asi chokwadi chekudzidza kutamba chingaunzawo kukuvadza kukuru kuvana vavo Nekuti vashoma vanhu vanoona kuti kudzidza kutamba nekukurumidza, kazhinji, kana kwete nenzira kwayo kunogona kukuvadza mumuviri nepfungwa kumwana.
Ndapota vabereki vanofanira kuteerera kune zvinotevera zvikanganiso!
Imwe, kutamba ndiko kugona kupatsanura, pasi - uta
Vabereki vazhinji vanounza vana vavo muzvidzidzo zvekutamba, vanovaratidza michinjikwa yakatwasuka uye yakatwasuka, uyezve wobvunza mudzidzisi, "Mwana wangu akakodzera kutamba here?", Ava ndivo vabereki vedu venyika kutamba vese kuziva kuti chero bedzi muchinjikwa, wakamira muchinjikwa, ndiko kuti kutamba, kutamba uye jimunasitikisi, kung fu hakuna musiyano? Vana vazhinji, mushure menguva yekudzidziswa kwekutamba, vanogona kutsemuka, asi hapana dhanzi dhizaini, hapana kuvhurika, hapana makumbo akatwasuka, hapana kusimba tsoka, vabereki havafunge kudaro.Kutamba kunoda hunyanzvi hwekuita, asi mamiriro emunhu ega ega akasiyana, saka chinonyanya kudikanwa kudzidziswa nesainzi uye nemhando chaiyo.
Chechipiri, kuita kwe "Strict mudzidzisi" chinhu chakanyanya kudikanwa kune hunyanzvi hwekudhanza hunyanzvi
Kubva pane yakanaka yekutamba hunyanzvi ndeyechokwadi, asi kwete munguva pfupi, kukuvadza kuenda kumberi, nezve amateur dhanzi dzidzo, kudoma uye kufambira mberi kutamba tsika ndiyo inonyanya kukosha sainzi, zvakare iri kutamba kujeri, kuita kwacho hakuna kukwirira kune chinodiwa chehunyanzvi hwekutanga senge yekumira forogo pasi pe "mwedzi mumwe" kupunzika, asi gumbo rinodzvanya, kick, pukuta pane zvese, sekutamba "moto unogadzira chimera chinotapira", inoda nguva nekushivirira.
Vana vakareruka kutamba musanganiswa ndinogona kuzviitawo. Iko kutambisa mari kuenda kukirasi yekudzidzira.
Isu tinogona kucherechedza kuti zvisinei kuti ndezvipi zvinhu zvemunharaunda zvekutarisa zvekushandisa zvine zvakawanda zvakapusa musanganiswa, vabereki vazhinji vanonzwa nziyo dzevana, ona chiitiko chedzidzo chiri nyore kwazvo, funga kuti hapana chikonzero chekushandisa mari, shandisa nguva pakirasi yakadaro yekudzidzira. Izvi zvakakanganisika zvachose, nekuti iyo tempo yemweya iri mumimhanzi nekutamba, kutamba naJane kune dzakawanda nzira dzekudzidza, icharega mwana aine gobvu yekutamba hwaro, mimhanzi yakanaka uye mutinhimira, mukudzokororwa kwakadzokororwa zvishoma nezvishoma kukudziridza kunzwisisa kwekutamba, huchawedzera rudo, kuda kutamba, kutamba, uye vabereki vazhinji vachazongo "tevera gourd ladle", uye kugona kwemashoko kushomeka.
Vadzidzisi vekutamba vanokodzera kana masangano ekudzidzisa ekutamba akanaka
Iko kusimudzira kweruzivo rwemagariro kunatsurudza izvozvi nezuva rega rega richipfuura, kutamba kwacho zvakare kuri kukurumidza, kunyanya mune mamwe madiki uye epakati-akakura maguta, dzidzo yekutamba ichiri kugara mumakore makumi mapfumbamwe, iro zano redzidzo uye nzira yatove haigone kuchinjika kune yekutamba dzidzo ikozvino, uye vadzidzi vazhinji vakagamuchira dzidzo yakanaka kudzoka kudzimba dzavo mumaguta makuru, kuunza zvakanyanya uye zvesainzi uye zvemberi pfungwa yekutamba kunonetsa kuwana mvumo yemuno, izvi zvinosuruvarisa, saka sarudza yakanaka mudzidzisi wekutamba kana sangano rekudzidzisa kwete kungo tarisa kune avo magineti uye nekupa nzira, kuronga chikoro, vazhinji vakawandisa vanofanirwa kutarisisa sangano rekudzidzisa, vadzidzisi havagone kutarisisa kuvana vangu? Kunyangwe nzira dzekudzidzisa dzevadzidzisi pachavo dziri dzehunyanzvi, kunyangwe ivo vanoteerera ruzivo rwekutamba, vangave vachida kutamba, kunyangwe vachienderana neThe Times, vangave vaine pfungwa yekuzvibata uye zvichingodaro.
Mupfungwa yakafara, vana vatotarisana nekutamba kubva pakuzvarwa.Iyi nguva amai vemoyo vanogona kufunga kuti mwana anoita zvekuita uye mwana pamwechete anoita mutinhimira, mutinhimira unowira. Chikamu chemwana chakasiyana, uye zera rekudzidza kutamba rakasiyana zvakare.Mudzimba yekutamba kunofanirwa kuve nzira yesainzi yekudzidza, usakurumidze kubata hunyanzvi hwekutamba hwakaoma.
Yapfuura:Zvakanakira uye kufunga kubva kuvasikana vanotamba kuchikoro chepuraimari
Tevere:Nei tutus iri kupfupika? TUTU zvinoreva 'gadheni revakadzi rakavanzika'?